खुशीको खबर ! कोरियामा इपिएस कामदारलाई थप ५० दिन भिषा ! – Korea Pati
April 13, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on खुशीको खबर ! कोरियामा इपिएस कामदारलाई थप ५० दिन भिषा !
कोरियामा इपिएस कामदारलाई थप ५० दिन भिषा थप हुने भएको छ । कोरियन श्रम मन्त्रलयको निर्णय अनुसार भोली अप्रिल १४ देखि लागु हुने गरि ईपिएस अन्तर्गत कोरिया आएर भिषा अवधि सकिन लागेर कोरोना महामारीको कारणले आफ्नो देश जान नसकेको प्रवासी श्रमिकलाई ५० दिनको भिषा थप गर्ने भएको हो ।अवधि सकिन लगेर आफ्नो देश फर्कन तयारीमा रहेको इपिएस ई ९ भिषा श्रमिकको संख्या १८ हजार ५०० छ ।
December 9, 2019 गुरुदत्त न्यौपाने